Lawula eyakho ipaki yomxholo wedinosaur kwiCrazy Dino Park | I-Androidsis
ICrazy Dino Park ngomnye umdlalo wokulinganisa omkhulu wepaki apho kufuneka ulawule enye yeedinosaurs. Ayisiyiyo le kuphela, kodwa kuya kufuneka ukhathalele ukumbiwa kwezinto zakudala ukufumana amathambo edinosaurs oza kuthi usebenze kuwo, kwangaxeshanye, ubonise epakini.
Umdlalo omnandi kakhulu apho kuya kufuneka uphucule izibonelelo zakho kwaye bemba kwezo zinto zokumba ukuze babe needinosaurs nomtsalane ngakumbi kwipaki yakho yokonwabisa. Isihloko esenziwe kakuhle esikusa ekufumanekeni kwezi zinto zinkulu ezazothusa wonke umntu eJurassic Park.
1 Ipaki yakho yeJurassic
2 Ukuphucula izibonelelo zakho eCrazy Dino Park
3 IDiplodocus, iTyrannosaurus ...
Ipaki yakho yeJurassic
Ekuqaleni uza kuqala ngomtsalane omnye kunye nomnyango wokungena ovula izibonelelo kubo bonke abo bafuna "ukuphambana" kunye needinosaurs zakho. Kodwa ayisiyiyo yonke into eya kuba lula, kuba kufuneka ube nezona dinosaurs zingakholelekiyo emhlabeni ukuze iibhokisi zakho zizaliswe kwaye ube yitycoon yeepaki zokuzonwabisa zedinosaur.
Ngokwenyani ubucukubhede yipaki yokonwabisa kunye nezixhobo ngasinye apho uya kuba needinosaurs kunye nendima oyidlalayo fumanisa amathambo akho. Le yokugqibela yeyona inomdla, kuba kuya kufuneka ukombise umhlaba ngezandla zakho ukuze ufumane amathambo edinosaur ahlukeneyo. Nje ukuba ufumaneke, kuya kufuneka usebenzise ipikkaxe ukufumana ezinye zeenxalenye zeemodeli zedinosaur ezikuchukumisileyo.
Njengokuba yayiyiphazili, kuya kufuneka ubeke la malungu angavulelwanga ukuze ubhale amathambo amakhulu I-Diplodocus okanye iTyrannosaurus ngokwakhe okanye yaziwa ngokuba yiTyrannosaurus Rex. Njengokuba ugqibezela amathambo ezi dinosaurs, ungazithatha uye kuzifaka kwindawo oya kuthi uyibonise uwonkewonke ngeenyawo, ulangazelela iimvakalelo ezomeleleyo.
Ukuphucula izibonelelo zakho eCrazy Dino Park
Ipaki yeCrazy Dino iyakuvumela phucula la maziko ukufumana enye imali njengembuyekezo. Unokufumanisa izinto eziyimfihlakalo, ufumane izinto ezinqabileyo kwaye wenze iminyhadala yokuvuselela imva kwemini yazo zonke iindwendwe ezifuna ukumangaliswa zizonke ezi zinikwa zezi dinosaurs.
Ungenza ngokwezifiso ipaki yakho yedayinaso kunye nezinto zokuhombisa zazo zonke iintlobo kwaye ungavavanya izakhono zakho ngokuchasene nabanye abadlali kwinto Ibizwa ngokuba yiCrazy Battle Sand Dino.. Sikuvumela ukuba uzifumanele ngokwakho ukuba yintoni elindele wena kunye nalawo maqela amaninzi othusayo eCrazy Dino Park.
Ngokwenyani enye ye Imidlalo yokudlala ebaluleke kakhulu yeCrazy Dino Ufumanise amathambo edinosaur amatsha kunye nayo yonke loo nto iphazili yokuba ukwazi ukufumana zonke iziqwenga. Kuba uyakufuna ezinye iincopho ezinenani eliqingqiweyo. Unokufumana ngakumbi ngentengiso okanye usebenzise elinye lamaxesha obomi bakho ukuqhubeka umba.
IDiplodocus, iTyrannosaurus ...
Amaphupha angapheliyo athunyelwe umdlalo ogqwesileyo kwiVidiyo kaGoogle Inenguqulo yayo yewebhu ukuze uqhubeke nokonwabela ezi zinto ziphambeneyo. Ipaki yokonwabisa ekubeka phambi kwe-simulator, endaweni ye-arcade, engenanto yokwenza ukuba wonwabe ixesha elide. Ngumdlalo ocingisiswe kakuhle ngandlela zonke.
Ngenxa yeso sizathu, ngokuqinisekileyo zilishumi nge isitayile esibonakalayo esiyimpumelelo kunye noyilo lweempawu ezigqwesileyo ukubanika ukuba bahlekise. Kuluyolo ukuthatha nayiphi na idayinaso uyiphose emhlabeni. Kuye kwaziwa ukuba isebenze inxalenye yokwemba ngokwaneleyo ngokwaneleyo ukwenza enye umdlalo wokudlala ngaphandle kolawulo ngokwalo, olongeza umgangatho ophezulu kuyo yonke iCrazy Dino Park; kwelinye icala sinomntu oqhelekileyo ebizwa ngokuba yiJurassic Hoper.
Ipaki yeCrazy Dino ngumdlalo omkhulu wedinosaur, Kungekudala emva kokuba inyani eyongeziweyo ifikile, apho kuya kufuneka ulawule ipaki iphela kwaye ube yinxalenye yezo zinto zakudala apho uza kufumana ezo diplodocus kunye nokunye. Umdlalo wasimahla ovela kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ukuze uyonwabele.
Imidlalo emibini komnye
Lawula eyakho ipaki yedinosaur!
Umthuthukisi: Amaphupha angenasiphelo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » KwiCrazy Dino Park kufuneka ulawule ipaki yolonwabo yedinosaur
UJisell tavera sitsho
Ndifuna ukwazi ukuba ndenza njani ukuze unondyebo aqokelele ngaphezulu kwe-5000 kuba kufuneka ndiphucule iingcingo kwaye zixabisa i-6000
Phendula Jisell tavera